आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनचाँदीको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…… – SUDUR MEDIA
April 9, 2021 AdminLeaveaComment on आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनचाँदीको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार……
आज चैत २७ गते शुक्रबार पनि सुन र चाँदीकाे भाउ बढेको छ । यस दिन सुनको भाउ तोलामा ९०० रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको भाउ पनि तोलामा २० रुपैयाँले बढेको छ । आजको दिन छापावाला सुन प्रतितोला ८९ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुन प्रतितोला ८९ हजार ४५० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघले जनाएको छ ।
अघिल्लाे दिन छापावाला सुन प्रतिताेला ८९ हजार र तेजाबी सुन प्रतितोला ८८ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै शुक्रबार चाँदीको भाउ पनि बढेर १ हजार २८० रुपैयाँ पुगेको महासँघले जनाएको छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोला १ हजार २६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्ः आफ्नो मोबाइल दर्ता भए/नभएको यसरी थाहा पाउनुस्, अनलाइनबाटै कसरी दिने दर्ता आवेदन ? पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले उपहार र इलेक्ट्रिक सामाग्री नल्याउने कमै होलान । त्यसमा पनि उपहारको पहिलो रोजाइमा पर्छ मोबाइल तथा ल्यापटप । अहिले फोन प्रत्येक मानिसको लागि अपरिहार्य भइसकेको छ ।
तर, विदेशबाट ल्याएर नेपालम चलेका अघिकांश मोबाइल विना दर्ता चलिरहेका छन् । यस्ता मोबाइल फोन हराएमा अथवा चोरी भएमा भेटिदैनन् भने नियामनको दायरामा आएका छैनन् । त्यस्तै तपाईंले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल खरिद गर्दा पनि दर्ता भए नभएको हेर्न जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा सस्तो मै मोबाइल पाइयो भनेर खरिद गरि हाल्ने प्रचलन छ ।
तर,उक्त मोबाइल दर्ता नभएको पनि हुन सक्छ अथवा अवैध माध्यमबाट विदेशबाट आयात भएर लुकिछिपी किनवेच भएकोपनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्मार्टफोन दर्ता छ अथवा छैन भनेर हेर्नु पर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि आगामी जेठ महिनाबाट नेपालमा आयात भएका अवैध मोबाइल र दर्ता विना चलेका मोबाइललाई नियामन गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्दै छ । जसमा मोबाइल आईएमईआई नम्बर अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । अन्यथा विना दर्ता सञ्चालन भइरहेका मोबाइल फोन बन्द हुँने छन् ।
दर्ता भए÷नभएको कसरी हेर्ने ? सबैभन्दा पहिला तपाईंले आफ्नो मोबाइल आईएमइआई नम्बर दर्ता छ वा छैन भनेर हुर्नु जरुरी छ । त्यसका लागी आफ्नो मोबाइलको आइएमईआई नम्बर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नम्बर हेर्न *#06# डायल गरेर हेर्न सकिन्छ । आईएमईआई नम्बर थाहा पाएपछि मात्रै आफ्नो मोबाइल दर्ता भएनभएको हेर्न सकिन्छ ।
स्मार्टफोन दर्ता भए/नभएको हेर्न मिल्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सफ्ट्ववेर विकास गरेको छ । जसका लागी यस लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्छ । क्लिक गरेपनि नो योर डिभाइस भित्र जानुपर्छ र त्यसमा आईएमईआई नम्बर राखेपछि रजिस्ट्रार भएको अथवा नभएको हेर्न सकिन्छ । यदि त्यहाँ तपाईको मोबाइल दर्ता नभएको देखायो भने नयाँ अनलाइन फारम भरेर आफ्नो मोबाइल दर्ता गर्न सकिन्छ । त्यसका लागी यो लिंकमा जानुस् ।